के तपाई थाहा छ धेरै रुनुका फाइदाहरु ? यस्ता छन् - ज्ञानविज्ञान
किताव पढ्दा होस् या फिल्म हेर्दा । कोही व्यक्ति यस्ता हुन्छन् भावनात्मक विषयमा आँसु झारिहाल्छन् । भावनात्मक कुरा गर्दा आँसु झार्ने व्यक्तिलाई कमजोर मुटु भएको भनेर चित्रित गरिन्छ । तर यसमा सत्यता छैन । केटाले रुँदा धेरैले ‘केटा भएर पनि रुन्छन् ?’ भन्छन् भने केटीले रुँदा सम्झाउने कोशिष गरिन्छ । फिल्मका इमोशनल दृश्य हेर्दा यस्ता व्यक्तिको आँखामा आँसु देखिहालिन्छ ।
जो व्यक्ति भावनात्मक कुरा गर्दा रुन्छन्, उनीहरु भावनात्मक रुपमा अरु व्यक्तिभन्दा राम्रा हुन्छन् । साथै यस्ता व्यक्तिको स्वभाव पनि धेरै राम्रो हुन्छ । यदि तपाईं पनि यस्ता व्यक्तिमा पर्नुहुन्छ भने यसमा शरम मान्नुको अर्थ छैन । यो तपाईंभित्र एक राम्रो गुण भएको संकेत हो । जो व्यक्ति रुन्छन्, त्यस्तालाई कहिल्यै पनि कमजोर सोच्नुहुँदैन । यस्ता व्यक्ति यो सोच्दैनन् कि सबैको अगाडि रुँदा अरुले के सोच्लान ? न त उनीहरु आफूलाई कमजोर नै ठान्छन् । जो एक राम्रो वानी हो ।
Topics #फाइदा #रुनु
Don't Miss it बहिरोपनबाट कसरी बच्ने ? बच्चाको कान सुन्ने क्षमता कसरी जोगाउँने ?
Up Next सात दिन मै आफ्नो उमेर १० बर्ष कम देखाउन चाहानुहुन्छ ? घरेलु उपाय
डिम्पल नहुनेहरुले यसरी पनि बनाउँन सक्ने रहेछन् गालामा डिम्पल
भन्दै डिम्पलवाला वा डिम्पलवाली भनेर चिनिन्छन् डिम्पल हुनेहरु । डिम्पल पर्नु भनेको सुन्दर हुनु हो भन्ने सोचाइ राख्नेहरुको साह्रै ठुलो…